PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-03-25 - Kuzophela ukuqagela ngelakwashembe
Kuzophela ukuqagela ngelakwashembe
Kucutshungulwa isinqumo esakhishwa yijaji ujappie
KUZOPHELA ukuqagela ngesinqumo esilindwe ngabomvu ngamanazaretha asebuhleni nawasethembezinhle, enkantolo yamajaji emgungundlovu mhla zili-11 ne-12 kumbasa (April).
Iphini likamengameli wamajaji Kwazulu-natal, umnu Isaac Madondo, selibazisile abameli banhlangothi zombili, okunguAdv Archie Findlay, omele uhlangothi lwasethembezinhle, oluholwa yinkosi uphinda “Inkanyeziyesithathu” Shembe no-adv Rajesh Choudree omele uhlangothi lwasebuhleni, oluholwa yinkosi umduduzi “Nyazilwezulu” Shembe.
Ummeli wasethembezinhle umnu Trevor Nkosi, okunguye owajuba ummeli wasemajajini, utshele ILANGA Langesonto ukuthi waziswe yihhovisi lamajaji emgungundlovu ngeledlule ukuthi nakanjani lezi zinsuku ezimbili zibekelwe ukuba amajaji amathathu ethule isinqumo sawo mayelana nokuthi ngabe umengameli wamajaji Kwazulu Natal, ijaji Achmat Jappie, lakhipha isinqumo esiyiso yini ngokuvuna uhlangothi lwasethembezinhle noma lashaya eceleni ngonyaka owedlule.
“Kuyasithokozisa ukuthi sezimenyezelwe izinsuku ebese zilindwe ngabomvu. Bese kunzima nakithi ukuthi sizobatshelani esibamele ngoba bebelokhu bebuze thina, nathi singenazo izimpendulo,” kusho umnu Nkosi.
Ijaji umnu Jappie lakhipha isinqumo ngowe-2016 sokuthi ongasekho inkosi uvela Muhle “Imisebeyelanga” Shembe nguyena owaqokwa yinkosi uvimbeni “Thingolwenkosazane” Shembe ukuba abe ngumholi uma yena endela koyisemkhulu. Inkosi uthingo lwafihlwa ngoNdasa (March) wezi-2011. Kwathi ngosuku lomfihlo wayo inkosi yamaqadi, umqoqi Ngcobo yayabula umbhobho yamemezela ukuthi uthingo lwabe luqoke unyazilwezulu ukuba lube ngumholi emuva kwalo. Inkosi ungcobo yathi uthingo lwakusho ngomlomo lokho izikhathi zaze zaba ntathu. Ngalo usuku lomfihlo, ummeli wothingo, umnu Zwelabantu Buthelezi, wafunda iheheba lencwadi athi yabe ilotshwe yisandla sothingo lukhomba umfowabo Imisebe ukuba iqhoqhobale izintambo.
Ubufakazi obethulwa enkantolo yamajaji ethekwini obadonsa iminyaka emihlanu, ijaji ujappie lathi bukhombe ukuthi ngisho ochwepheshe bezandla nokulotshiwe bavumelana ngokuthi kwakuyisandla salo ngqo uthingo esakhomba Imisebe.
Ngosuku lwesinqumo, unyazilwezulu lwafaka isikhalo sokuba kubuyekezwe leso sinqumo luthi alwenelisekile ngamaphuzu athile abekwe yijaji. Ngasekupheleni konyaka odlule amajaji amathathu alalela izethulo zezinhlangothi zombili maqede asifaka ekhwapheni isinqumo yingakho nje ezosikhipha ngalezi nsuku.